Nkwenye Ogo - Mepụtaproto - Mepụta Proto Tech Co., Ltd.
AKW RKWỌ / Njirimara Ogo
Anyị na-arụ ọrụ nke njikwa njikwa nke akwadoro ma kwado ya na ụkpụrụ ISO 9001: 2015. Nke a na-egosipụta ntinye aka anyị na-aga n'ihu n'ịdị mma na afọ ojuju ndị ahịa. Usoro mmesi obi ike anyị na-eme WayKen ihe kachasị nchebe, nhọrọ a pụrụ ịdabere na ya maka ọrụ gị ọzọ.
Ebumnuche Anyị Dị Mma ：
Emechara ngwa ahịa gafere ≥ 95%
On-oge nnyefe ọnụego ≥ 95%
Nkwado ndị ahịa ≥ 90%
A na-ararapụtaProto raara onwe ya nye ka ọ na-emeziwanye ma na-achọpụta ikike nke ngwa ngwa ngwa ngwa niile site na prototype na mmepụta na usoro njikwa njikwa anyị, gụnyere igwe CNC, ngwa ngwa ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Usoro Ogo na CreateProto na-elekwasị anya n'ọdịmma nke ndị ahịa mgbe ị na-emepe usoro ọhụụ na nke na-aga n'ihu iji mepụta akụkụ omenala yana nkọwa gị nke gafere atụmanya. CreateProto bụ kpam kpam dị na ISO 9001: 2015 gbaara àgwà nnyocha usoro, anyị na-eji elu ule akụrụngwa ka ịlele na inyocha niile nke ngwaọrụ, mgbe anyị àgwà engineer otu nwere ọkachamara technology inyocha ma hụ na gị oru ngo izute stringent àgwà nkọwapụta, iji irite obi ike nke ndị ahịa anyị na ụlọ ọrụ.
Anyị Quality Policy
Mepụta usoro iwuziri ahazi na sayensị; Ulatemepụta usoro ọrụ na koodu ọrụ; Zụọ ndị ọrụ mara mma nke nwere ọkwa izizi; Melite mmepụta arụmọrụ.
Dabere na atụmanya na ụkpụrụ sitere n'aka ndị ahịa, anyị na-aga n'ihu na-ewusi ọtụtụ akụkụ nke ọrụ na njikwa dị ka njikwa atụmatụ atụmatụ, usoro mmepụta ihe kachasị mma, njikarịcha usoro nhazi, ntinye njikwa njikwa, yana ogo ndị ọrụ. Na-aga n'ihu na-akawanye mma, na-agbaso ịdị mma, ma na-emewanye afọ ojuju ndị ahịa.
Ogo na arụmọrụ
Site na ntinye nke usoro njikwa njikwa ogo, n'oge usoro ọ bụla na nrụpụta na-ewusi njikwa njikwa na nyocha, na-eme ka njikarịcha nke usoro ụlọ ọrụ ahụ, na nkwukọrịta dị mma n'etiti ndị ahịa na ngalaba, na-azụkwa mmata nke ndị ọrụ, na-akwalite iji kwalite na-emejuputa teknụzụ, ma na-arụpụta ngwaahịa dị elu nke ọma.
Innovation na priselọ ọrụ
Mepụta usoro nzukọ mmụta, mejuputa njikwa ihe ọmụma, chịkọta ma hazie ihe ọmụma maka usoro mmezi na mgbochi, teknụzụ mmepụta sitere n'aka ndị ọkachamara ọkachamara ma ọ bụ ngalaba, data azụmaahịa ma ọ bụ ahụmịhe mmepụta iji mepụta akụ bara uru dị mkpa nke ụlọ ọrụ, nye ndị ọrụ ohere ọzụzụ na-aga n'ihu. ahụmịhe, gbaa ume ọhụrụ ma wulite ịdị n'otu ụlọ ọrụ.
Anyị àgwà usoro ihe omume na-agba ọsọ site dum oru ngo si RFQs na Mbupu Mbupu. Nyocha abụọ nwere onwe nke usoro ịzụta bụ ebe QA anyị bidoro, na-achọpụta na enweghị ajụjụ ma ọ bụ esemokwu gbasara akụkụ, akụrụngwa, ọnụọgụ ma ọ bụ ụbọchị nnyefe. Mgbe ahụ, ndị ọrụ ahụmahụ nwere aka na ntọala ahụ na mmepụta na nyocha nke onye ọ bụla na-enyocha maka ọrụ ọ bụla achọrọ iji mepụta akụkụ ahụ. Edere mkpa na ntuziaka niile pụrụ iche na oge nyocha ka e kenyere dabere na nnabata, ọnụọgụ ma ọ bụ mgbagwoju anya nke akụkụ ahụ. Anyị na-ebelata ihe ize ndụ site na ịdebe na nyochaa usoro ọ bụla nke usoro mmepụta anyị iji belata akụkụ ka akụkụ dị iche iche, ma kwenye na-agbanwe agbanwe, ntụkwasị obi maka akụkụ ọ bụla, oge ọ bụla.
Na-agbanwe agbanwe àgwà akara, site akụkụ ruo akụkụ, ngwaahịa na oru ngo, anyị na-a paya ntị zuru ezu, idozi nsogbu, na-eme nnyocha ọhụrụ ihe na Filiks, itinye ego na technology, ewu na-akwadokwa a otu nke ọkachamara ngwa ngwa n'ichepụta.
Echepụta maka nrụpụta maka imepụta ihe (DFM) maka ọrụ gị niile
Nkwekorita na usoro ịzụta ihe
Ike imepụta na nyocha atụmatụ imepụta (PMC)
Na abata na akụrụngwa nnyocha
Ihe nlele na nyocha usoro (IPQC)
Njikwa ngwaahịa na-enweghị nkwekọrịta na mmejuputa usoro mmezi na mgbochi
Nyocha ikpeazụ na nyocha nyocha na asambodo dị ka achọrọ (OQC)
Nyocha nke afọ ojuju nke ndị ahịa ugboro abụọ n'afọ, ma gbalịa ịfe karịa atụmanya ndị ahịa
SEREIN Croma 8126 Nhazi Machine (CMM) 800 × 1200 × 600 (mm), MPE (oke njehie nwere ike) 3.0μm
ScanTech PRINCE775 Handheld 3D nyocha Laser isi: 7 + 1 red laser obe / 5 -acha anụnụ anụnụ yiri laser edoghi Irè ọrụ nso 200mm ~ 450mm / 100mm ~ 200mm, Ezi ruo 0.03mm
Nchịkọta Nnyocha Granite, 1200 × 1000 (mm) / 1000 × 750 (mm)
Ogologo nke Vernier Caliper, 0-100-150-200-300-600-1000 (mm)
N'èzí Micrometers / Digimatic Holtest, 0-25-75-100-125-150 (mm) / 12-20-50-100 (mm)
Full Ran of Pin Gage / Gage Block, 0.5-12 (mm) / 1.0-100 (mm), Nzọụkwụ 0.01mm
Elu Roughness Tester, ekweghị ekwe Tester, wdg
Otito Prototyping na Manufacturing, Fast Prototyping, CNC Rapid Prototyping, Otito Prototyping, CNC Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services,